चीनले बनायो मानिसको ज्यान नलिने अदृश्य हाइपरसोनिक हतियार, पश्चिमा देशहरुमा हलचल ! | Prahar News
चीनले बनायो मानिसको ज्यान नलिने अदृश्य हाइपरसोनिक हतियार, पश्चिमा देशहरुमा हलचल !
काठमाडौं । चिनियाँ वैज्ञानिकको एक टोलीले ध्वनीको गतिभन्दा ६ गुणा तिव्र हाइपरसोनिक हतियार निर्माण गरिरहेका छन्। यो हतियारले मानिसको ज्यान लिदैन तर यसले शक्तिशाली विद्युत–चुम्बकीय झड्का सिर्जना गर्नसक्छ जसले हजारौं किलोमिटर टाढासम्मका सम्पूर्ण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गर्नुका साथै विद्युत आपूर्ति पनि बन्द गरिदिनसक्छ।
यो हतियारमा स्टिल्थ प्रणाली हुनेछ जसका कारण यसलाई राडारले पत्ता लगाउन नसक्ने चीनको एकेडेमी अफ लन्च भेइकल टेक्नोलोजीका सुन चेङ नेतृत्वको टोलीले बताएको छ।
वैज्ञानिकका अनुसार यो हतियार जहाँ विस्फोटन गराईन्छ त्यहाँ कसैको पनि ज्यान जाने जोखिम हुँदैन। तर सो स्थान वरपरका दुई किलोमिटर क्षेत्रका विद्युतीय सामग्री भने जल्नेछ। यो हतियार अहिले अवधारणाकै चरणमा छ। तर चीनको नयाँ पुस्ताको हतियार प्रणालीमा यो हतियारले आधारभूत भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
यो हतियार विकास भएमा चीनले रणनीतिक हिसाबमा विश्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिनसक्छ। अरुको संचार प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएसँगै चीनले आफ्नो प्रभुत्व बढाउने निश्चित छ।
अमेरिका विश्वको सबैभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्र हुनुमा उसको हतियारले मात्र भूमिका खेलेको छैन। संचार प्रणाली नै नभए अमेरिकाले कुनै काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन। –एससीएमपीको सहयोगमा